Iingcamango zesigqeba seSayensi seNzulul
Ubushushu bomzimba obuqhelekileyo bubonwa ngokuba ngu-98.6 F okanye 37 C. Iqondo lokushisa lomzimba lingahluka 1/2 ukuya kwi-1 F ngaphantsi okanye ngaphantsi kwe-98.6 F kwaye isathathwa njengesiqhelo. Ubushushu bomzimba buhluka kunye nezinto ezininzi ezibandakanya izinga lomsebenzi.
Thatha ubushushu bakho kusasa, ngemini nasemini. Ngaba yatshintsha? Ngaba unokuchaza isizathu sokuba
Ukuzivocavoca imizuzu engama-30. Thatha ubushushu bakho ngqo emva kokugqiba, isiqingatha seyure emva koko, kunye neyure enye emva koko. Ngaba yatshintsha? Ngaba unokuchaza isizathu sokuba
Yintoni eyenzekayo xa ubushushu bomzimba wakho buphezulu kakhulu? Kwenzeka ntoni xa izinga lokushisa lomzimba lakho liphantsi kakhulu?
Qhagamshelana neZibonelelo zokuQalisa iProjekthi yeScience Fair
Ukunyuka kwamaqondo okuBhunga
Iqondo lokushisa eliqhelekileyo lihluka ngumntu, ubudala, ixesha lemini, kwaye apho emzimbeni kuhanjiswe khona ubushushu.
Ukushisa kunye neCold Exposures
Yiyiphi iqondo lokushisa lomoya ogqithiseleyo onokuyenza kumgangatho wakho wokushisa.
I-Body Temperature FAQ
Iimpawu zeFilver, unyango, kunye neCandelo loLungisa
Ngale Misebenzi yeeNzululwazi eziLungileyo
Iiprojekthi zezenzululwazi ezifumaneka kwiNzala yabaTsha ziingcamango eziqulunqwe yiNkokeli yalo, uDenise D. Witmer. Ezinye ziiprojekthi ezigqityiweyo ngexesha lokusebenza kwakhe kunye nabafundi besikolo esiphakamileyo, iiprojekthi zophando kunye nezinye iingcamango zangaphambili. Nceda sebenzisa le ngcamango yezobugcisa njengesikhokelo sokuncedisa umntwana wakho ukuba azalise iprojekthi yezenzululwazi ngokusemandleni abo. Kwinqanaba lakho njengomcebisi, kufuneka uzive ukhululeke ukuwabelana ngale projekthi, kodwa ukuba ungenzi le projekthi kubo.
Nceda ungayikukopisha le mibono yeprojekthi kwiwebhusayithi yakho okanye kwiblogi; thumela ikhonkco ukuba unqwenela ukwabelana ngawo.
Iincwadi eziphakanyisiweyo zeProjekthi zeNzululwazi eziLungileyo
365 Isayensi yeNzululwazi Iingcamango Zemihla ngemihla
"Izinto ezisisiseko zesayensi ziya kuphila ubomi obumnandi kunye nezemfundo-kwiimvavanyo ezingenziwa ngokulula kwaye zingenangqiqo ekhaya." Abantu abathenge le ncwadi baye bathi kulula ukuyiqonda kwaye lukhulu kumfundi ofuna iphrojekthi kodwa abanomdla kwiinsayensi.
Le ncwadi yenzelwe abafundi abancinci nabadala.
I-Scientific American Book ye-Great Science Fair Projects
"Ukususela ekudaleni izixhobo zakho ezingezizo iiNewtonian (i-slide, i-putty, ne-goop!) Ekufundiseni intsholongwane yegciwane indlela yokuhamba ngayo, uya kukhwankqiswa kwizinto ezintle ongayenza ngeScientific American Great Science Fair Iiprojekthi. Ngokusekelwe kwikholam ye-"Amateur Scientist" ende ehloniphekileyo kwaye ihlonishwa kakhulu kwiScientific American, ixesha elilodwa lunokuyenza kunye nezinto eziqhelekileyo ezifumaneka kwindlu okanye ezifumaneka ngokulula ngeendleko eziphantsi. "
Amacandelo okuPhumelela kweeNkqubo zoPhuhliso lweSayensi
"Ebhalwa ngumgwebi osesikweni senzululwazi kunye nomndilili wenzululwazi wehlabathi jikelele, oku kufuneka kube ne-resource resource ephethe izicwangciso kunye nezikhombisi zokuhlanganisa iprojekthi efanelekileyo yokufumana isayensi. Nakhu uya kufumana i-nitty-grarit in a variety of topics, ukususela kwizinto ezisemgangathweni kwinkqubo enobulungisa yesayensi kwiinkcukacha zokugqibela zokupolisa inkulumo yakho. "
Incwadi Yenzululwazi engapheliyo: ISingqinisiso se-Scientific Young
"Ukwazisa ama-64 alinganiselo alenzululwazi, aqhube, aqhube, aqhube, aqhube, aqhube, ahlambe! Kusuka ku-Marshmallows kwi-Steroids kwi-Lightning Made-Making, iSandw Bag Bag kuya kwi-Great Cannon, unomdla ngelixa ebonisa imigaqo yezenzululwazi njenge-osmosis, uxinzelelo lomoya, kunye ne-Newton's Third Law of Motion. "
I-Rermite Reaction - Imiyalelo kunye neKhemistry
Ziyolise iiProjekthi zeBlue Science
Indlela iMigc Play Play Imithetho eyahluke ngayo kwiStroke Play Imithetho
I-Scorpio kunye neCapricorn Love Compatibility
Imithi Enkulu Yobumfihlo, iMida, kunye ne-Windbreaks
Abantu Abaphambili KwiMemes: Bakuphi Ngoku?
Isisombululo soLuntu oluqhelekileyo Ikhefu 3 Iingcebiso: Umngeni weNkolelo